Ekpere a na -ekpegara San Ramón Nonato? mechie ọnụ na ụmụ nwanyị dị ime [+]
Ekpere San Ramón Nonato Ọ bụ akụrụngwa kachasị mma nke ụmụ nwanyị dị ime n’ihi na a maara ya dị ka otu n’ime ndị nsọ na-enyere ndị tụụrụ ime aka.
N’ezie enwere ike ịrịọ ya maka ihe ndị ọzọ nke, n’agbanyeghi ọnọdụ ya, ga-arịọchitere anyị.
Ekpere siri ezigbo ike, anyị enweghị ike ileda ike ha anya.
Fọdụ enwekwaghị okwukwe ma ọ bụ maka otu ụwa si dị ugbu a mana naanị olileanya anyị nwere ekwesịghị ịla n'iyi.
Site na ekpere anyị nwere ike mee ka ihe niile dị mma ma mgbe enwere ọnọdụ siri ike na ndụ, anyị nwere ike gbaba n'ime ya iji nweta ike ma gaa n'ihu n'ụzọ.
1 Ekpere Saint Ramón Nonato Onye bu onye?
1.1 Ekpere San Ramón Nonato ka emechie onu
1.2 San Ramón Nonato ekpere megide asịrị
1.3 Maka ndi nwanyi di ime
Ekpere Saint Ramón Nonato Onye bu onye?
Aha nwa a anaghi aria.
E nyere ya n'ihi na nne ahụ tụfuru ndụ ya tupu San Ramón hụrụ ìhè nke ụwa ọhụrụ nke ga-anata ya. Nke a bụ otu n’ime ihe mere o jiri bụrụ otu n’ime ndị nsọ maka ụmụ nwanyị dị ime.
Akụkọ ya laghachiri n’afọ 1200 mgbe amụrụ ya, mgbe ọ ghọrọ okenye, okwukwe ya n’enweghi nchekwuru kpọgara ya n ’Africa ebe ọ nyeere ọtụtụ ndị aka dịka onye mgbapụta a dọtara n’agha.
Isi ozi gi ga-atọgbọ n'ihi ụfọdụ ndị mkpọrọ Ha nọ n'ọnọdụ ọjọọ.
Mgbe o mesoro mmerụ ahụ, onye ọka ikpe a nyere iwu ka anyị nweta atụmatụ ka mma maka ịnweta mgbapụta ahụ ezubere.
Agbanyeghị, San Ramón Nonato bụ onye kpatara iso ikwusa ozi ọma na inyere ndị chọrọ ya aka na ozugbo onye ọka ikpe ahụ mara ya ikpe ọnwụ, ikpe a zere ya n'ihi na ha kwụrụ ụgwọ mgbapụta ya wee hapụ ya.
Ekpere San Ramón Nonato ka emechie onu
Saint Ramon Nonato maka ike ị nwere nakwa na Chukwu enyerela gị nye m ihe m rịọrọ gị itinye mgbachi n’ọnụ ndị chọrọ ime m ihe ọjọọ.
(Kpoo aha onye / s)
Ndị na-ekwu okwu megide m ma ọ bụ nwee mmụọ ọjọọ, chọrọ itinye m ihe ọjọọ, m na-amụnye oriọna a ka ị mechie ọnụ gị.
I mezuru ihe m rịọrọ gị, n’ihi na ị jiri okwu Chineke kwusaa ya, enyere ya ka ọ bụrụ Sharia ka ọ buru imechi ọnụ gị.
Gee ntị na ekpere m Saint Ramon Nonato ịgbachi nkịtị na ịrịọ arịrịọ n’ihu Chineke Nna maka ndị na-ekwu okwu ọjọọ banyere m na-akwụsị na mbọ ha Chukwu niile siri ike nyere gị.
Ọchịchọ na-ekpo ọkụ ịtọhapụ ndị ohu, na-akwụsị m mgbe ọ bụla na agwa ọjọọ, n'aka ndị iro, na aghụghọ.
N'ime ndị chọrọ imerụ m ahụ, mee ka m biri n'udo, nọrọkwa m n'ebe ndị niile na-ara m ụra na-ata m ahụhụ.
Nke ahụ bụ n'ihi ekworo, ihe ọjọọ ma ọ bụ iwe, Achọrọ m ihe ọjọ sitere n'aka ndị chọrọ ịkwanye m nkwutọ ha, San Ramón Nonato.
Jiri ịdị mma gị dị ukwuu, ahapụla arịrịọ m n’arụghị ọrụ, ana m arịọ gị maka Onyenwe anyị Jizọs Kraịst.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ imechi ọnụ, Nke a bụ ezi ekpere San Ramón Nonato.
Okwu Chineke dọrọ aka na ntị banyere etu o siri dị njọ ọ nwere ike ịbụ asụsụ mmadụ, kwuru nwere ike igbu ihe karịrị egbe.
Nke a bụ ya mere na ụka katoliki na nke Kraịst anyị kwenyere na San Ramón Nonatos nwere ike inyere anyị aka imechi ọnụ ndị ahụ na-emeghe na-akpata anyị ọjọọ n'ụzọ dị ukwuu.
Nke a bụ usoro udo n'agbanyeghị nke a emebi ihe n'ihi na anyị anaghị abọ ọbọ, kama anyị na-arịọ ka ọ bụrụ nke dị nsọ imechi ndị na-emejọ anyị.
San Ramón Nonato ekpere megide asịrị
Oh, Saint Ramon Nonato a ma ama, gị onye, ​​site n’ịkụzi okwu nke Chineke, kenyekwara gị dịka ịta ahụhụ iji were mkpọchi n’ọnụ nke okwu a.
Nuru nmeghari m ma me nzaghachi n’iru Chineke Onye nwe anyi ka ndi na ekwu okwu ojoo banyere m kwusi igbusi m aka, ewe chebe m ha ma obu ihe ojoo ma obu ebumnuche ojoo obula.
Biko, Chinekem nke kachasi ihe nile, Onye nyeworo Saint Ramon Nonato ikike nke nnwere onwe ndi ohu, na-ario Gi maka ikpe ya.
Mee ka m wepu m mgbe nile na nrube isi, na mmehie nke na-ekewapu m n’ebe ị nọ, na m na-enwe ihe ịga nke ọma n’ịdị n’udo, na-esokwa ndị niile na-eme m ihe ọjọọ ma na-emekpa m ahụ.
Na ọ na-ejikwa ikewapụ onwe ya iche ruo mgbe ebighi ebi na ndị na-emegide ya, n'ihi ihe ọ bụla, ajọ omume ma ọ bụ iwe, na-achọ ka m mee ihe ọjọọ.
Ma ọ bụ, ha chọrọ iji mechuo m ihu.
Chineke onye me eme, amatara m na gị na ebere gị dị ukwuu, sitekwa na ntinye aka nke Saint Ramon Nonato, ị gaghị ahapụ itinye akwụkwọ anamachọ ihe m.
Ana m arịọ gị, site na ihe okike gị, Jizọs Kraịst, Onyenwe anyị anyị hụrụ n'anya, onye bụ onye na-achịkwa gị na mmụọ nsọ Saint Ramon Nonato niile.
Gị onwe gị, onye bi gị nso na Chineke, rịọ ya maka ihe isi ike m, na enweghị m nchebe na nchekwa gị mgbe niile, na diplọma gị a ma ama nyere m aka n'oge ọ bụla jọrọ njọ na ọnọdụ siri ike.
Asịrị bụ ihe ọjọọ nwere ike imebi ezinụlọ, ọbụbụenyi ma ọ bụ ọnọdụ ọrụ. Ọtụtụ ahụ erughị ala na mmebi dị aghụghọ nke ukwuu nke na anyị anaghị achọpụta rue mgbe emechara ihe ọjọọ.
Ekpere nke Saint Ramon Nonato megide asịrị Ọ na - enyere gị aka ichebe gị pụọ n'ihe ọjọ a.
Anyị nwere ike ịrịọ maka anyị ma ọ bụ nye enyi ma ọ bụ onye anyị na ya nwere nsogbu na adịghị ike.
Ihe dị mkpa n’ekpere a na ihe niile, ọ bụ okwukwe nke ejiri ya mee yaAnyị kwesịrị ịtụkwasị obi na ọ bụrụ na anyị rịọ, yabụ nzaghachi Chukwu ga-erute anyị oge niile, agbanyeghị ọnọdụ anyị nwere.
Maka ndi nwanyi di ime
Gi ka m ji gosi obi-ebere nile banyere ebe ị na-emeso ndị na-efe gị.
Onye Nsọ, nabata ekpere m nke m ji obi m niile nye gị, na icheta ekpere gị nke ukwuu, na ha sitere n’aka Chukwu onye mere gị onye nlekọta pụrụ iche nke ụmụ nwanyị dị ime.
Lee, Onye Nsọ m, otu onye n’ime ha nke ga-agbadata n’okpuru nchedo gị na nchedo gị, na-arịọ gị ka a na-echekwa ndidi gị oge niile n’ime ọnwa asatọ ahụ niile ị nwụrụ n’ihi iko gị na padlock.
Na ihe mgbu ndị ọzọ nke ị nọrọ n’ime ụlọ ebe gbara ọchịchịrị ma n’ọnwa nke iteghete ị hapụrụ ụlọ mkpọrọ ndị ahụ niile ka ha nwere onwe ha, ya mere Onye Nsọ na onye ọka iwu m, eji m obi ume ala na-arịọ gị ka ị bịakwute m site na Chineke m na Onyenwe m ...
Na anumanu nke ejigide n’ime ihe nile m chebere na ndu na aru ike rue onwa asatọ, n’ime iteghete n’agha n’agha n’uwa nka, mee ka gi, Onye Nsọ m, ma n’uche na nkpuru obi gi puta. N’elu ahụ gị bụ ụbọchị Sọnde, nke bụ ụbọchị ị joyụrị ọ joyụ na ọ theụ, nke mere ụbọchị a mụrụ m bụ afọ ojuju na ọ joyụ niile, na ọnọdụ niile ị maara kacha mma maka ebube Chineke na gị na nzọpụta m. nkpuru obi m na nke nwa m nwoke.
La ekpere maka ndi nwanyi di ime de San Ramón Nonato bụ otu n’ime ihe kachasị mma ị nwere ike ikpe n’ekpere.
Onye na-echebe ntụkwasị obi nke ndị nọ n'okike, San Ramón Nonatos amabeghị dịka onye enyemaka dị ukwuu ma ọ bụ onye mgbapụta nke ụmụ nwanyị dị ime.
Anyị ma na ịtụrụ ime ndụ ọzọ bụ ọnọdụ na-eme ka ahụ mmadụ ghara ịdị nro.
N'ọnọdụ ọ bụla nke ihe mberedeỌ bụrụ na enwere afọ ime dị elu ma ọ bụ nsogbu ọzọ, onye nsọ a na-aghọ nnukwu ebe mgbaba.
N'ime usoro mmegharị ahụ, a na-atụ aro ịme oge maka San Ramón Nonato maka ụmụ nwanyị dị ime kwa ụbọchị nke ụka Katọlik kwadebere n'ụzọ dị mkpa maka oge a dị mkpa na ndụ mmadụ ọ bụla.
Nanị ihe a chọrọ bụ okwukwe nke eji ya eme ihe.
E nwere ọtụtụ ndi kwere ekwe ndi nasi na ha enweta enyemaka site na saint a N'oge ụfọdụ mgbe ha chọrọ ya.
Kemgbe ọ nọ n’ụwa, ọ gbadoro anya n’inyere ndị ụwa na-atụ n'ọnụ aka na agbanyeghị ma ọ bụ imebi ahụike ha ma ọ bụ nnwere onwe ha.
Ihe ọ na-eche mgbe niile bụ inyere ma nwee okwukwe na onye ọ bụla ọ hụrụ.
Nke a bụ otu ihe ahụ taa, ọbụlagodi mgbe ọtụtụ afọ agaala kemgbe ọ nwụrụ, San Ramón Nonato gara n'ihu na-enyere ndị nọ n'ọnọdụ ọnọdụ anụ ahụ ma ọ bụ nke mmụọ aka n'oge.
Agbanyeghị, okwukwe bụ ihe nzuzo nke na-eme ekpere ọbụla ike, Akwụkwọ Nsọ na-agba anyị ume ka anyị jụọ oge anyị chọrọ enyemaka na ikelekwa maka amara enyere anyị.
Ihe kachasị mkpa bụ kpee ekpere San Ramón Nonato na okwukwe!